Wararka - Maareeyaha ciyaarta mobilada ma mudan yahay in la iibsado?
Loogu talagalay Nintendo
Wixii Xbox ah
Maareeyaha ciyaarta moobiilka ma mudan yahay in la iibsado?
Ma mudan tahay in la iibsado? Waxay ku xiran tahay ciyaarta aad ciyaareyso iyo sababta aad u tiraahdo dhibaatada la qabsashada awgeed. Inta badan ciyaaraha mobilada ee suuqa ku yaal ma laha adap -ku -shaqeysi oo lagu shaqeeyo. Si kale haddii loo dhigo, waxaa laga yaabaa inaadan u adeegsan karin inaad ku ciyaarto ciyaarta aad rabto inaad ciyaarto markaad iibsato koontaroole oo aad dib u laabato. Sida furayaasha qaarkood loo gelin karo daloolka gurigaaga, laakiin ma furi karaan albaabka gurigaaga. Dabcan, ma jirto si loo xaliyo. Maalmahan, xakameeyayaal badan oo ciyaarta mobilada ayaa lagu sawiraa softiweer, si hawlgalka koontaroole uu u ekaado hawlgalka shaashadda taabashada. Si kastaba ha ahaatee, habkani wuxuu leeyahay cillado. Tirada badhamada gacanta ku jira ayaa xadidan. Ciyaaraha mobilada qaarkood waxay u baahan yihiin in la riixo wax ka badan badhamada gacanta ku jira, iyo cayaaraha mobilada ayaa loo habeeyay qalliinka shaashadda taabashada inta lagu jiro horumarka. Iyada oo la adeegsanayo jilitaanka softiweerka, ma jirto si dabiici ah sida shaashadda taabashada.
Haddii ay habboon tahay in la iibsado, waxay ku xiran tahay haddii aad diyaar u tahay inaad tuurto
Maxay dad badani u jecel yihiin inay ciyaaraan ciyaaraha moobiilka? Waxaa sabab u ah sahlanaanta taleefannada gacanta. Taleefannada gacanta ayaa markii hore loo adeegsan jiray aaladaha isgaarsiinta mobilada, haddana waxay noqdeen kombiyuutarro yaryar oo guurguura. Taleefannada gacanta, dadku farriimaha ma diri karaan oo keliya goor kasta iyo meel kasta, laakiin sidoo kale waxay sawiraan oo daawadaan filimada. Dhageysiga muusikada, ciyaaridda ciyaaraha, iyo xitaa xoogaa shaqo fudud ayaa lagu samayn karaa taleefanka gacanta. Iyada oo leh hal gacan oo kale, taleefanka ayaa laga yaabaa inuusan ku habboonayn jeebkaaga. Hal gacan oo kale, waa inaad waqti ku bixisaa inaad barato goobaha ka hor intaadan ciyaarin. Dhibaatooyinkan ayaa shaki la'aan si weyn u yareeya ku raaxaysiga ciyaaraha mobilada.
Marka la eego cilladahaan, muxuu qof u horumarin karaa maamulaha ciyaarta moobiilka?
Tani waa in laga hadlo faa'iidooyinka gacanta marka la barbar dhigo dhalada. Qoriga hal-gujiska ah, isku-darka hal-furaha ah iyo “hawlgallada sao” kale ee saameeya dheelitirka ciyaarta oo lagu hirgeliyo softiweerka suuqa, yaanan ka hadlin. Marka la barbardhigo xoqitaanka dhalada, waxaa jira badhanno jireed, kuwaas oo u sahlan in si indho la’aan ah loogu shaqeeyo (ha fiirin meesha badhamada ay ku shaqaynayaan), farahuna kuma jiraan shaashadda, oo aan hor istaagi doonin aragtida ciyaarta. Runtii, haddii ciyaarta si fiican loo waafajiyo, waxay noqon doontaa mid aad u raaxo badan in lagu shaqeeyo gacanta iyadoo aan la marin dhalada.
Waqtiga dhejinta: Oct-16-2021
Cinwaanka:Qolka 2214, Fenlin International Building Longgang Avenue, Longgang, Shenzhen, China